Sefafi : “Tokony hametra-pialana ny 25 jolay 2018 ny filohan’ny Repoblika” | NewsMada
Sefafi : “Tokony hametra-pialana ny 25 jolay 2018 ny filohan’ny Repoblika”
Efa saika any amin’ny fanomanana ny fifidianana filohan’ny Repoblika ny ankamaroan’ireo antoko politika lehibe suy matanjakana. Amin’izany, tokony hametra-pialana ny 25 jolay 2018 ny filohan’ny Repoblika, raha ny nambaran’ny Sefafi.
“Nankatoavin’ny lalàmpanorenana 2010 ny fepetra vaovao izay milaza fa tsy maintsy mametra-pialana 60 andro mialoha ny datim-pifidianana ny filohan’ny Repoblika mirotsaka ho kandidà handimby ny tenany ihany, And. 46.”
Izay ny voalazan’ny Sehatra fanaraha-maso ny fiainam-pirenena (Sefafi) ao amin’ny fanambarany: “Hanahaka ny teo aloha ihany ve ny fifidianana manaraka?”, ny 1 avrily. Milaza ny lalàmpanorenana fa “ny fifidianana ny filohan’ny Repoblika dia tanterahina farafahakeliny telopolo andro ary farafahabetsany enimpolo andro mialoha ny fahataperan’ny fe-potoana iasan’ny filoha am-perinasa”, And. 47. Hatao ny 25 novambra 2018 izany ny fihodinana faharoa.
Araka izany, atao 30 andro raha ela indrindra aorian’ny fanambarana ofisialy ny vokatry ny fihodinana voalohany ny fihodinana faharoa. Raha hafainganina ny fanambarana ny voka-pifidianana fihodinana voalohany, mety hotanterahina ny 25 septambra 2018. Tena azo atao izany, raha misy ny fitaovana toy ny fifandraisan-davitra mora entina. Noho izany, tokony hametra-pialana ny 25 jolay 2018, raha ela indrindra, ny filohan’ny Repoblika, araka ny And. 46 ao amin’ny lalàmpanorenana.
Miantso ny hanaovana fifidianana ny depiote farahakeliny miaraka na mialoha ny fifidianana ny filohan’ny Repoblika fihodinana voalohany ny Sefafi. Hahazoana manangana ny Antenimierampirenena alohan’ny handaniana ny tetibola 2019 izany: mialoha ny fivorian’ny depiote momba ny tetibolam-panjakana, oktobra 2018.
Mbola be ny tsy fahatomombanana amin’ny fikarakarana fifidianana
Miisa 9.124.901 ny mpifidy amin’ny lisi-pifidianana nakatona ny 31 janoary 2017. Mahasadaikatra io isa io. Efa manakaiky ny 25 tapitrisa ny mponina, ary mihoatra ny 18 taona ny antsasany. Noho izany, tokony hamoaka ny antsipiriany ny lisitra ny Ceni: fanasokajiana ara-jeografia, ny lahy sy ny vavy ary ny taona…
Mbola olana ny fahaleovantenan’ny Ceni eo anatrehan’ny fitondrana, indrindra ny minisiteran’ny Atitany sy ny rantsa-mangaikany. Tokony hizatra hanao tamberin’andraikitra amin’ny olom-pirenena ny Ceni. Tsy ampy fangaraharana ny asany, tsy ampy fiseraserana amin’ny vahoaka.
Mbola mahavelona ahiahy ny HCC
Tafiditra ao amin’ny foiben’ny savorovoro tamin’ny 2001-2002 sy 2013 ny Fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana (HCC). Ahiahina ho miray tsikombakomba amin’ny mpitondra, indrindra amin’ny filohan’ny Repoblika, ny HCC ankehitriny. Asa na marina na tsia izany, fa tsy mandrisika ny vahoaka hatoky azy.
Tokony hohararaotin’ny HCC hanaporofoana izao fahatongavan’ny fifidianana izao fa tsy mitanila izy, mahay ny asany ary mahery fo. Moa ve izy ho toy ny taloha ihany ka ho mpandray anjara fototra amin’ny krizy aorian’ny fifidianana?